EYONA NDAWO IMNANDI YASEROYAL ENGAGEMENT IMISESANE KUNYE NOKUKHANGELA OKUKHANGELEKAYO - UTHETHATHETHWANO
Eyona Uthethathethwano Imisesane emitsha yokuzibandakanya kwasebukhosini kuyo yonke iMbali, kunye neeNdawo zokuKhangela onokuzithenga ngoku
Imisesane emitsha yokuzibandakanya kwasebukhosini kuyo yonke iMbali, kunye neeNdawo zokuKhangela onokuzithenga ngoku
Ezi ntlantsi ziya kukwenza uzive ngathi ubukumkani. Imifanekiso kaGetty
UShelley ubhala kwaye ahlele amanqaku e-Knot Worldwide, ngokukhethekileyo kwifashoni, ubuhle, ubucwebe kunye nezixhobo
UShelley ubhala kwaye ahlele amanqaku ephephancwadi i-Knot, kunye nezitayile zemagazini yefashoni kunye nesembozo
Phambi kweKnot yeHlabathi liphela, uShelley wayengumhleli weDijithali ozimeleyo kwiConde Nast's Lucky Magazine kunye ne-freelanced ye-FLAUNT Magazine, iLos Angeles Magazine, iBackstage.com kunye nePaste.com
Ukuhlaziywa ngoJan 04, 2021 Sifake iimveliso zomntu wesithathu ukukunceda uhambe kwaye wonwabele awona maxesha makhulu obomi. Ukuthengwa okwenziwe ngekhonkco kweli phepha kungasifumana ikhomishini.
Ukusuka kwiindaba ze I-podcast entsha kaMeghan noHarry kwi-premiere yeXesha lesi-4 le 'Isithsaba' kwiNetflix, usapho lwasebukhosini lwaseBritane lunomzuzwana. Kwaye, ngenxa yokuba benazo ezona zintle zibalulekileyo zokuzibandakanya kwasebukhosini kwihlabathi, sihlala sicinga ukuba bangabo njalo ezihamba ngokwembono yobucwebe. Yintoni le siyithandayo? Ngelixa kungekho mfihlo usapho lwasebukhosini luye lwanamathela kwizithethe ezihlonitshwayo zexesha, ukhetho lwabo be-sparkler alulindelanga kwaye lisebenza njenge-ring inspo. (Cinga: amatye embala embala, useto olucokisekileyo lweediliya kunye neenkcukacha zala maxesha). Kwaye ayinguye wonke umntu onakho ukufikelela kwi-jeweler ye-Queen's-you have to guide you. Apha ngezantsi, siqokelele amanye amakhonkco abadumileyo asebukhosini okuzibandakanya ngalo lonke ixesha, kunye nokubonisa ukubonwa kwendlela onokuyithenga ngayo ngoku.
Wallis Simpson, iDuchess yeWindsor Engagement Ring
Ihlazo lasebukhosini elatshintsha ikhosi yosapho lwasebukhosini lwase-Bhritane unaphakade, uKing Edward VIII wasirhoxisa isihlalo sakhe sobukhosi watshata no-American Wallis Simpson ngo-1936, embonisa Isangqa esimenyezelayo se-emerald ukusuka eCartier uneentloni nje zee-carats ezingama-20. Sele isetiwe kwakhona, kodwa useto lwantlandlolo lwaluyintaba yegolide etyheli eneenkcukacha zeidayimani zebaguette. Ngaphakathi kwakukrolwe 'Singabethu ngoku' kwaye yabhalwa ngo-Okthobha 27, 1936, umhla uEdward awacebisa ngawo. Ukuba ukule ringi yasebukhosini yokubandakanya iindandatho, unethamsanqa-kwenzeka nje ukuba i-emeralds yenye yazo ezona zinto zibalulekileyo zokubandakanya umsesane ka-2021 . Inqaku lomhleli: Ukuba ukhetha elinye lala magugu aqaqambileyo aluhlaza, qhubeka ngononophelo. Zomelele kancinci kuneedayimani kwaye azenzelwanga ukuba zinxibe mihla le kwaye zikrazuke.
Imibono yezipho zekrisimesi kamamazala
ISYLVA kunye neCIE I-Diamond Berel ring ring, i- $ 18,000, OysterJewelers.com
Izinto ezilungileyo I-Emerald Sika i-Emerald Ring ngeDayimani yePavé, $ 37,800, Izinto zeGoodGood.com
UCathy Waterman Isangqa sotyelelo lwangoku oluhlaza, Buza iiNkcukacha, WhiteBirdJewellery.com
Ukumkanikazi u-Queen Elizabeth II
INkosana uPhilip yacebisa ngasese kuKumkanikazi uElizabeth II ngo-1946 (ukubandakanyeka akuzange kubhengezwe esidlangalaleni de kube ngunyaka kamva) ngeringi azenzele yona, esebenzisa iidayimani ezivela kumama wakhe, iNkosazana Andrew yaseGrisi naseDenmark. Isangqa sokuzibandakanya kukaKumkanikazi uElizabeth II sibonisa ilitye leziko ledayimani elisisikwere esi-3-carat ngeenxa zonke elibekwe ngesinyithi esimhlophe kunye needayimane ezincinci ezili-10 kwiqela. Ukulungele ukuba neemvakalelo? Iminyaka engama-73 yonke emva koko, ukumkanikazi usayinxiba le ringi yonke imihla, uhlala ebhangqiwe kunye neqela lakhe lomtshato elityheli. Ukulingisa uKumkanikazi waseNgilani ngokwakhe, khangela iringi enelitye elisikiweyo kunye nedayimane ezincinci okanye izihloko zedayimani.
V. IBarboné I-Chelsea 3.02 yeringi yokubandakanya idayimane ngamatye asecaleni, i- $ 44,000, UVictorBarbone.com
Intyatyambo Isangqa sokubandakanya idayimane eqaqambileyo ngamanyathelo amathathu ebhendi yedayimane, ukusuka kwi- $ 4,950, Kwiat.com
Ubucwebe buka-Ashley Zhang Isangqa sokubandakanya i-Classic Old European Solitaire, $ 20,750, AshleyZhangJew jewelry.com
UPrincess Diana kunye noKate Middleton, iiDuchess zaseCambridge zokuzibandakanya
Enye yeerandi zokuzibandakanya ezidumileyo emhlabeni, umsesane wokuzibandakanya kukaPrincess Diana waqhekeka nesiko lasebukhosini ngo-1981 xa wazikhethela yena ekukhetheni izinto zobukhosi basebukhosini kunye nezinye iziqwenga zexabiso ezivela kwisithsaba se-jeweler kusapho lwasebukhosini lwaseBritane ngelo xesha, UGerrad. I-sapphire eyi-carat okweqanda eyi-12 ejikelezwe ziidayimani ezi-14 ezijikeleze ikarati emhlophe eyi-18 yayivela kwikhathalogu esele ikho kaGerrard. Ngelo xesha, ukumkanikazi wayengonwabanga ukuba umsesane wokuzibandakanya wawusisiqwenga sesitokhwe esasingesososapho lwasebukhosini kuphela kwaye sinokuphindwa. I-iconic blue-sparkler yenze imbali kwakhona xa iNkosana uWilliam yacebisa uKate Middleton ngayo ngo-2010. Funda phezulu kwimbali epheleleyo yomsesane apha . Ukujonga, yiya kwilitye eliliziko eliluhlaza okwesibhakabhaka kunye nokucwangciswa kwedayimani. Kwaye ungakhathazeki-awunyanzelekanga ukuba ukhethe i-carat jewel ye-12 ukufumana umphumo ofanayo.
UMlambo iNayile Isangqa sesafire, Oval $ 3,990, BlueNile.com
Ixilongo kunye nePhondo I-Airlie isafire kunye ne-diamond ring, i- $ 5,800, TrumpetandHorn.com
Thelma West Isafire kunye neringi yedayimane, Buza iinkcukacha, ThelmaWest.com
USarah Ferguson, iiDuchess zeYork Engagement Ring
Intsomi yasebukhosini ithi iNkosana uAndrew yacebisa uSarah Ferguson ngo-1986 ngerubhi enqunqwe i-ruby yaseBurmese evela kwiivenkile zeGarrard ngenxa yokuba umbala wayo ovuthayo uhambelana neenwele zakhe ezibomvu. Ilitye elibomvu elibomvu lalirhangqwe yi-halo yedayimani eneentyatyambo kwaye ibekwe ngegolide etyheli. Ngelixa eli qhekeza linokubangela Iiringi zokubandakanya iruby Ukuqhubela phambili ekuthandeni kwii-80s, zihlala zikhetha ukuba zi-weds zikhangele enye into engalindelekanga kwiidayimane (vele ubuze uKaty Perry).
uyazi ukuba uyathandana xa ucaphula
UMlambo iNayile Isangqa se-ruby embhoxo ene-halo ephindwe kabini yedola, $ 3100, BlueNile.com
Ubucwebe buka-Ashley Zhang Iruby kunye nekhonkco leqela ledayimani, $ 2,700, AshleyZhangJew jewelry.com
Ngokucacileyo Iringi Halo iringi yeringi, ukusuka kwi- $ 2,255, KunyeClarity.com
UCamilla, iiDuchess zeCornwall Ring Ring
INkosana uCharles yacebisa uCamilla Parker Bowles kwi2005 ngedayimani enkulu, enqunywe nge-emerald eyayikade ingu-Queen Mum. Enye yeeringi zokuzibandakanya ezixabisekileyo kusapho lwasebukhosini lwaseBritane, isiqwenga sobugcisa sikwadwelisa amatye amakhulu emacaleni edayimane. Ukufezekisa ifuthe elifanayo le-megawatt njengendandatho kaCamilla, yiya kwilitye leziko lejometri (i-asscher kunye ne-diamonds ezisikiweyo zisebenza ukongeza kwi-emerald cut) ejikelezwe zii-baguettes ezinkulu ezisecaleni.
Iimayini zegolide I-DB Classic trio emerald-cut cut diamond, ukusuka kwi- $ 26,300, DeBeers.com
uzilungiselela njani eCalifornia
UJean Dousset Isangqa samatye amathathu sokubandakanya amatye ngemigca emi-3 yedayimane, Buza iinkcukacha, UJeanDousset.com
JB Inkwenkwezi Isangqa sokubandakanya idayimani yePlatinam, Buza iinkcukacha, Amagosa.com
Isandi sokuzibandakanya sikaZara Tindall
Umdlali wombhoxo waseGloucester uMike Tindall ucebise uZara Phillips (ekuphela kwentombi kaPrincess Anne kunye nomzukulwana omkhulu kaKumkanikazi uElizabeth II) kwi2010 enesangqa sokwenza isivumelwano. Isangqa sikaZara senziwe ngedayimane ejikelezileyo enebhendi eqhekeziweyo (okanye eyahlulwe) yebhanti enedayimani ebekwe kwiplatinam. Ukuphindaphinda le ndandatho yokubandakanyeka ebukhosini, ukubethelela ukumiselwa kubalulekile. Khangela iringi nge-shank yokwahlulahlula okanye uyilo lwe-'X 'ukuze ufumane ukuziva okufanayo kwe-ultra-modern.
Ingqungquthela Isangqa sokuzibandakanya kuka-Micaela X, ukusuka kwi- $ 4,245, Forevermark.com
USylvie Isangqa sokubandakanyeka kweshank yokubandakanya, ukusuka kwi- $ 1,885, SylvieCollection.com
UNicole wavuka I-Pave yokwahlulahlula iringi yokubandakanya idayimani, Buza iinkcukacha, NicoleRoseJew jewelry.com
UMeghan Markle, iiDuchess zeSussex Engagement Ring Imifanekiso kaGetty
NiniINkosana uHarry yacebisakumlingisi uMeghan Markle ngo-2017, wamnika iringi entle nenentsingiselo. Iringi yokuzibandakanya kaMeghan Markle, idayimane enamatye amathathu ebekwe ngegolide etyheli ibandakanya ilitye leziko elivela eBotswana-indawo esondele kakhulu entliziyweni yeNkosana uHarry-ebekwe phakathi kweedayimani ezimbini ezincinci, ezingqukuva, ethathwe kwingqokelela yomama wakhe ongasekhoyo uPrincess Diana. Akumangalisi ukuba useto lwamatye amathathu lube lulo lonke ingqumbo kuba le yenze indlela eya kwiliso loluntu. Jonga ezinye zeempazamo zethu zefave apha ngezantsi.
Ingqungquthela I-Accents ™ indandatho yokuzibandakanya enamacala amabini, ukusuka kwi $ 4,995, Forevermark.com
UGrace Lee Umncedisi ngerapezoids iringi yedayimane kathathu, $ 9,800, UbabaloLee.com
UShahla Karimi Ilitye le-emerald elitye-3 + likonxantathu osikiweyo, ukusuka kwi- $ 2,990, ShahlaKarimi.com
UPrincess Eugenie waseYork Engagement Ring
UJack Brooksbank wacebisa uPrincess Eugenie waseYork ngo-2018 ngomsesane obengezelayo wesafire kwindawo yedayimani. Eyaziwa ngokuba yi-pink-orange hue, i-padparadscha sapphire ihlala ifumaneka eSri Lanka. Ukuba olu luyilo lukhangeleka luqhelekile, kukho isizathu soko: I-rosky sparkler eqaqambileyo iyafana nendandatho eyanikwa ngumama ka-Eugenie, uSarah, iiDuchess zase York, evela kwiNkosana u-Andrew ngo-1986. I-peach-to-pink embindini wamatye (i-morganite okanye iadayimani ye-champagne lukhetho olukhulu ukuba awufumani sapphire ye-padparadscha) kwisimo se-halo esiphefumlelweyo sokuvuna.
UAnna Sheffield Igolide emhlophe yegolide yaseCelestine kunye ne-champagne, $ 11,750, AnnaSheffield.com
kuphosiwe I-Oval pavé halo indandatho yokuzibandakanya, ukusuka kwi- $ 1,950, Gemist.co
Selim Mouzannar Ikhonkco enkulu kaMorganite kunye neDayimane, i-4,000 zamaRandi, Ylang23.com
uthini umsitho wesanti
I-Princess Beatrice yaseYork yokuThetha ngeRingi
U-Edoardo Mapelli Mozzi wacebisa iPrincess Beatrice kwi-2019 ngeringi yedayimane engapheliyo eyenziwe nguShaune Leane. Ukushiya i-pink pink kunye ne-red sparklers ezinxitywa ngunina, uSarah, iiDuchess zaseYork kunye nodadewabo, uPrincess Eugenie waseYork, umsesane kaBeatrice ubonakalisa idayimane esikiweyo eneenkcukacha zecala le-baguette kwindawo yeplatinam. Ngaba ujonge ukuba isimbo sikaBeatrice? Khetha useto olucekeceke apho iiguette ezincinci ezisecaleni zibeka konke ukugxila kwilitye elijikeleze iziko.
Intyatyambo Isangqa sokubandakanya idayimane ebengezelayo enamatye amabini ecaleni kwebaguette, ukusuka kwi- $ 3,900, Kwiat.com
V NguLaura Vann I-Illusion Bullet kunye neRilliant Sika umsesane wedayimane, Buza iiNkcukacha, VByLauraVann.com
Ngokucacileyo Isangqa esineendandatho zokubandakanya idayimane, ukusuka kwi- $ 740, KunyeClarity.com
Utata intombi yeengoma zomdaniso 2020
uyicela njani imali
Imibono yesipho seminyaka engama-50 somtshato wabahlobo